Kumashe onogada abangeneme | News24
Kumashe onogada abangeneme
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Abasebenzi abangonogada bebemasha ukukhombisa ukungenami kwabo emsebenzini.
ABASEBENZI abawonogada abangaphansi kwenkampani i-Enforce futhi abangamalungu eSouth African Allied Workers Union (Satawu) bangene emgwaqeni bezwakalisa ukungenami kwabo emsebenzini.
Abasebenzi laba bebephelezelwa abanye ozakwabo abangonogada abasebenzela ezinye izinkampani zonogada.
Usihlalo we Satawu eMgungundlovu uMnu Chief Dlamini uthe le mashi bebehlele ukuthi bayenze bengabasebenzi bese behambisa izikhalazo zabo kumqashi.
Uthe kunezinto eziningi abasebenzi abangonogada abangeneme ngazo ngasohlangothini lomqashi.
“Ezinye zalezi zinto indlela umqashi ahlela ngayo izinto uma ezoqasha. Abasebenzi abaneliseki yindlela umqashi asebenza ngayo uma ezoqasha onogada.
Siphinde sibe nenkinga yokuthi umqashi uma eqasha ngamabanga (grades) nakhona unendlela enganelisi abasebenzi uma eqasha ngokwamabanga. Kunabantu ovele ubabone sebekhona sebenza ngaphandle kokuthi kulandelwe imigudu efanele.
Umqashi uphinde abe nokukhetha iphela emasini emsebenzini. Kunalabo abayizintandokazi kuyena kanti futhi kuba nalabo angabazwisisi kahle futhi angabathandi,” kusho uDlamini.
Omunye wabasebenzi uthe bake bahlala phansi nomqashi bamtshela futhi bamazisa ukuthi yiziphi izinto abangeneme ngazo. “ Sibale nesimo sokusebenza esingesihle esisebenza ngaphansi kwaso. Izimoto ezingamaveni esihamba ngazo ezikho esimeni esihle.
“Azinazihlalo akuzona izimoto ezingasetshenziswa ukuthi zingasetshenziswa abantu kodwa thina sisebenzisa lezo zimoto. Kuningi esingahambisani nakho kanti lokhu akukhona okokuqala siba nenkinga nomqashi.
“Nangesikhathi esidlule sibe nezinkinga nabaphathi sagcina siphoqelekile ukuthi sibaxoshe ngoba sithi kuzoba ngcono kodwa kusafana. Okubi ukuthi asizange simthole osehhovisini lakwandabazabantu kwa -Enforce.
“Sibe sesiphoqeleka ukuthi uhla lwezikhalazo zethu silunike uMnu Leon Steyn,” kubeka lo umsebenzi.
I-Enforce ithe akekho ozoyikhulumela ne-Echo